पाँच दशकअघि बन्देज लगाइएको खेसरी दालको उत्पादन र बिक्री किन रोकिएन ? - चौतारी पोष्ट अनलाइन
काठमाडौं ,चैत २१, २०७७
सरकारले खेसरी (दालको जात) उत्पादन र बिक्री वितरणमा बन्देज लगाएको पाँच दशक बढी भइसकेको छ तर अझै यसको उत्पादन र बिक्री वितरण रोकिएको छैन ।
उनका अनुसार तराईमा दालसहित खेसरी सागका रूपमा पनि खाने गरिन्छ । खेसरी उत्पादन र उपभोग गर्न नहुने विषयमा त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई जानकारी नै नभएको पनि उनले बताए । उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्रदेश २ का अध्यक्ष ललित शाहले खेसरी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भनिए पनि तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा यसको दाल खाने चलन छ तर बजारतिर भने त्यति धेरै नपाइने बताए । गोरखापत्र दैनिकमा छ।
Prevवैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हकमा विशेष कानुन नहुँदा न श्रीमती, न सम्पत्ति !
Nextलामो समयदेखि निष्क्रिय केन्द्रीय अनुगमन समिति सक्रिय बन्दै